Dagaal u dhaxeeya Al-Shabaab oo Baay ka socda- Lix loogu Aaray Al-Amriki
Top:-Dagaal u dhaxeeya Al-Shabaab oo Baay ka socda- Lix loogu Aaray Al-Amriki
27 April 2013 Waagacusub.com-Lix ka tirsan Maleeshiyadda Al-Shabaab ayaa ku dhintay dagaal u dhaxeeyay garabyo kala taabacsan Amiirka Kooxdaas Ahmed Abdi Godane iyo ku xigeenkiisa Mukhtaar Roobow Cali.
Dagaalka labada garab oo ka dhacay degaanka Raama-Caddey ee gobolka Baay ayaa dhashay kadib markii Maleeshiyo taabacsan Ahmed Godane dhaawaceen nin ka mida Saraakiisaha Alqaeda ,laguna magacaabo Abuu Mansuur Al-Amriiki.
Abuu Mansuur Al-Amriiki ayaa barta uu ku leeyahay Twitter-ka wuxuu ku faafiyay sawiro muujinaya isagoo dhaawaca,wuxuuna ku sheegay in sedex xabadood looga dhiftay dhabarka asagoo fadhiya meel shaaha laga cabo.
Abuu Mansuur Al-Amriki wuxuu la saaxiib yahay Hogaamiyaha 2-aad ee Al-Shabaab Mukhtaar Roobow Cali.
Xaalada deegaanka Raama-Caddey ayaa aad u kacsan , isgaarsiintuna way go’an tahay.
Deegaanka Raama-Caddey wuxuu hoos tagaa degmada Qansax-dheere ee gobolka Baay, waxaana la rumeysan yahay inay ku sugan yihiin horjoogayaal sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab.
Omar Hammami oo asal ahaan ka soo jeeda gobolka Alabama ee dalka Mareykanka wuxuu ka mid yahay maleeshiyaadka ajnabiga ah ee ka barbar dagaallama Al-Shabaab.wuxuuna isticmaalaa magaca Abuu Mansuur Al-Amriki.
Weerarka Al-Amrika ayaa daba jooga khilaaf mudo dheer u dhaxeeyay isaga iyo Amiirka Al-Shabaab Ahmed Godane.
Todobaad ka hor waxaa Website-ka Sunatimes.com lagu faafiyay Warbixin dheer oo Abuu Mansuur Al-Amriki ku sharaxay sidii loo dilay Dagaalyahanadii Ajnabiyiinta Alqaacida ee Somalia sida Saleh Nabhani,Fazul Abdallah,Bilaal Al Barjawi iyo Abdallah Al Sudani.
Al-Amriki oo kashifay dhamaan sirtii Alqaeda iyo Al-Shabaab ee Somalia wuxuu tibaaxay in Amiirka Al-Shabaab Mr Ahmed Godane dilay dhamaan dagaalyahanada uu magacyadooda xusay.
Warbixinta ku qoran afka Ingiriiska ee Abuu Mansuur Al-Amriki maaha mid laga xiiso dhici karo akhrinteeda balse waa dheer tahay oo mar qura lama wada akhrin karo.